Zvinokonzera greenhouse effect: matambudziko uye mhinduro | Green Renewables
ChiGerman Portillo | 05/05/2022 12:00 | Environment
Mhedzisiro yegreenhouse chinhu chakasikwa chemhepo yepasi redu uye naizvozvo chikamu chekushanda kwechisikigo kwehupenyu hwehupenyu. Nekudaro, kana mhedzisiro iyi ikawedzera uye ikava yakakura kupfuura maitiro echisikigo, iyo yakasikwa greenhouse effect inomira kuvapo uye inova yakaipa, inonyanya kukonzerwa nekuwedzera kwekuita kwevanhu. Pakati pe zvikonzero zve greenhouse effect yakaipa, inonyanya kuzivikanwa ndeyekuwedzera kwekubuda kwegreenhouse gasi kubva kusimba redu remagetsi. Chaizvoizvo, kuwedzera kwekushandiswa kwemafuta ezvicherwa nezvinobvamo, gasi rechisikigo nemarasha zvinoparira kubuda kwemagasi aya, izvo zvinowedzera dambudziko. Pakati pemigumisiro yechiitiko ichi tinowana kuwedzera kwekushisa uye kuderera kwemarudzi. Sezvineiwo, pane zvinhu zvishoma zvatingaite kugadzirisa dambudziko iri.
Nechikonzero ichi, isu tichakumikidza chinyorwa ichi kuti tikuudze zvese zvaunoda kuziva nezve zvikonzero zve greenhouse effect uye nemhedzisiro yayo.
1 Chii chinonzi greenhouse effect
2 Zvikonzero zve greenhouse effect
3 Chii chinonzi GHGs
4 migumisiro nemigumisiro
5 Zvinogona kugadziriswa
Chii chinonzi greenhouse effect
Iyo greenhouse mhedzisiro Maitirwo echisikigo anoitika mumhepo yePasi.. Iyo nzira inotanga kana simba rezuva rasvika paPasi, richifamba nemumhepo, uye richipisa nyika kana geosphere, pamwe chete nemvura yepamusoro kana hydrosphere. Kupisa kunobva pamusoro penyika kunokwira ipapo, magasi emuchadenga ndiwo anotarisira kuchengetedza chikamu chesimba muchimiro chekupisa, uye mamwe ose anodzoserwa muchadenga nemumhepo. Nenzira iyi, hupenyu hwaigona kuvepo paPasi sezvatinozviziva nekuti tembiricha yakakwana yaichengetwa mune mamwe mamiriro.
Nekudaro, nekufamba kwemakore, kukanganisa kwekuita kwevanhu pasirese kwakakanganisa kuita uku, kuchishandura kuita chimwe chinhu chakaipa. Izvi zvakasikwa maitiro inokuvadza kupasi uye naizvozvo kune zvipenyu zvose zviri pairi, nokuti kusvibiswa kunobva mumabasa evanhu kwakakura zvakanyanya mumazana emakore achangopfuura, kunyanya mumakumi emakore achangopfuura, yakaita zvakawanda zvokuti panguva ino mhepo yakaipa yegreenhouse inoumbwa.
Naizvozvo, isu vanhu tinosvibisa nharaunda nekuizadza nemagasi egreenhouse mumabasa edu ezuva nezuva, akadai kugadzira, kutyaira, kushandiswa kweaerosols kana kurima kwakanyanya uye kwemaindasitiri. Dzinokwira mumhepo uye dzinochengetwa, zvichiita kuti kupisa kunokwira kubva pamusoro kurege kubudiswa zvakanaka uye kuchengetwa nemhepo yakapoteredza pasi, zvinova ndizvo chaizvo zvinoitika mudzimba dzinopisa zvirimwa, zvichiita kuti tembiricha yepasi iwedzere.
Sezvatakataura, chikonzero cheyakaipa greenhouse effect ndiko kuwedzera kwezviitiko zvevanhu zvinobva mukusvibiswa, izvo zvinoburitsa magasi anoramba ari mumhepo uye anobatsira kukwidza tembiricha. Kazhinji, zvikonzero zvikuru zveozone layer matambudziko ndeaya anotevera:
Kutadza kupora uye kushandiswazve kwezvinhu.
Inoshandisa mafuta efossil uye haiwanzo shandisa simba rinogona kudzokororwa.
Kunyanya kushandiswa kwemagetsi kusingabvi kune zvinogadziriswazve.
Kusashandiswa zvisizvo kwemotokari dzinosvibisa dzakaita semota, mabhazi, midhudhudhu nendege dzinoshandisa zvinobva kumafuta efossil.
Zvose izvi zviito zvevanhu zvinotungamirira kukuwedzera kwemagasi anokuvadza anobatsira kune greenhouse effect.
Chii chinonzi GHGs
Iwo makuru egreenhouse magasi ane thermal insulation properties ndeaya anotevera:
Kukanganisa kwedambudziko paozone layer kwakazoita kuti pave neruzivo rwakakomba pasirese. Pane kudikanwa kwekunzwisisa nekuita kuti vamwe vazive, kunyanya kuburikidza nedzidzo yevana, nezvesimba uye kuziva nezve greenhouse effect, uye kukosha kwayo muhupenyu hwevanhu uye mamwe marudzi emiti nemhuka. Aya ndiwo mhedzisiro yedambudziko remuchadenga iri:
Kupisa kwepasi kwakawedzera zvakanyanya.
Kufurira kwemwaranzi yezuva kunowedzera.
Shanduko yemamiriro ekunze.
Mhedzisiro yemamiriro ekunze uye shanduko yezvakatipoteredza pane ecosystems.
Kusanaya kwemvura kunowedzera munzvimbo dzinowanzonaya.
Kuchava nekuwanda kwemvura nemadutu munzvimbo dzisingawanzonyorova uye dzinonaya.
Kukukurwa kwevhu, kurasikirwa nembereko pakurima.
Kunyunguduka kwemahombekombe echando echando uye mazaya echando, senge yakakurumbira Galenland inonyungudika.
Kukwira kwemvura mumakungwa, nyanza, nzizi, madziva, madziva, nezvimwe.
Mafashamo anoitika munzvimbo dzemahombekombe nekuda kwekukwira kwemvura.
Pakupedzisira, isu tichataura pamusoro pemhinduro dzipi dziripo kurwisa greenhouse athari, sezvo zvichidikanwa kuita zvese zvinogoneka kumisa kuwedzera kwayo uye kuderedza mwero wemagasi anokuvadza. Naizvozvo, sechiyero chekudzikisa greenhouse mhedzisiro uye kudzivirira kuwedzera kwayo uye kuomarara, tinogona kutevedzera aya matipi:
Deredza kuburitsa gasi regreenhouse seCO2 neCH4.
Shandisa zvitubu zvesimba rinodzokororwa kutsiva mafuta efossil, zvinobva pazviri, gasi rechisikigo uye marasha.
Shandisa zvifambiso zvevoruzhinji nezvimwe zvifambiso zvisina kusvibisa, zvakaita semabhasikoro kana zvimwe zvifambiso zveecology.
Simudza ruzivo rwezvakatipoteredza pakati pevagari uye, zvakanyanya kukosha, pinza ruzivo urwu muvana uye uvadzidzise zvavanogona kuita kugadzirisa dambudziko.
Deredza kudya kwenyama nekudaro kuderedza kushandiswa kwezvipfuyo zvine simba uye zvemaindasitiri, sarudza zvipfuyo zvakagadziridzwa magene nezvimwe zvipfuyo zvinoremekedza zvakatipoteredza.
Hurumende dziri kubatanidzwa mukutora matanho ekuderedza dambudziko iri uye kudzivirira kuwedzera kwegreenhouse effect uye kuchinja kwemamiriro ekunze. Muenzaniso wematanho aya iKyoto Protocol.
Ramba uchiongorora budiriro inogoneka ine chekuita nenyaya dzezvakatipoteredza.
Recycle uye mhanya nemazvo. Mugwaro rino rekuita zvakare tinotsanangura mashandisirwo emarara pamba.
Usapedze simba, semagetsi mumba mako.
Idya organic zvigadzirwa.
Kukuvadza kwakakomba kwezvirimwa nemhuka nekuda kwekuchinja kwemamiriro ekunze epasi.
Kutama kwemhuka nevanhu.
Ndinovimba kuti neruzivo urwu unogona kudzidza zvakawanda nezve zvikonzero zvegreenhouse effect uye maitiro ayo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Green Renewables » Environment » Zvikonzero zve greenhouse effect
Maitiro ekunyorovesa nharaunda pasina humidifier